Zvinotaridza kuti bvunzo yeglucose yeApple yakakomba | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti bvunzo yeglucose yeApple yakakomba
Patent nyowani kubva kuApple inoratidza kuti iyo yeropa glucose yekutarisa system haisi yekungonzwa chete. Zvinotaridza kuti vari kunyatso shanda pairi uye kunyangwe isu tine chokwadi kuti hazvizove nyore vanhu vese ava vanofanirwa kutarisa huwandu hweglucose zuva nezuva vaigona kuwana imwe yakanaka.
Ichokwadi ndechekuti patent haigone kuve iko kwekushanduka uye kushoma muApple pane patent "kunyangwe mweya waunofema" asi zvirokwazvo iyi patent nyowani yakaburitswa na Apple Insider zvinogona kuchinja hupenyu hwedu kuitiswa mune smart wachi kubva kuCompertino kambani.
Iyo patent inotaura nezve isiri-inopinda mita
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mamwe ese mabasa haagone kukanganiswa neichi uye nekudaro iri dambudziko guru kune vese Apple mainjiniya kuzviita. Mune ino kesi, ivo vanga vaine hukama ne terahertz yemagetsi mwaranzi. Kungotsanangurwa kungave mhando yemagetsi emagetsi inokwanisa kuratidza huwandu hweglucose muropa nekuda kwekutorwa kwetissue.
Zvinonzwika zvakaoma uye ndizvo. Hatigone uye hatifanire kunge tiri pasi pekufungidzira nezve iyi patent nyowani nekuti iri kure kure, asi kana ikagona kuitiswa muApple Watch, haingoshandise chete kuona mazinga eglucose, yaizogona zvakare kuona mamwe mamiriro eganda.
Zvinoita sekudaro Apple yakatsunga kuita chinhu ichi Uye kunyangwe ichingova patent, tinovimba kuti iyi ndeimwe yeavo vaunopedzisira waona nenzira chaiyo pane Apple mudziyo. Pasina mubvunzo chingave chiitiko chinoshamisira uye chingadzivise kuita punchi kana kuiswa kweiyo subcutaneous sensor (senge yatove kushandiswa nhasi) kuyera kukosha kwakakosha kune vanhu vane chirwere cheshuga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvinotaridza kuti bvunzo yeglucose yeApple yakakomba
Apple inotora kodzero kuDolly bhaisikopo inotarisana naFlorence Pugh
Apple Mepu ichawedzera ruzivo pamusoro peanomhanya makamera, tsaona uye traffic jamu